Ny fanjakana ankehitriny momba ny marketing amin'ny atiny 2014 | Martech Zone
Ny fanjakana ankehitriny momba ny marketing amin'ny atiny 2014
Alahady, Jona 22, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa mahita infographic toa an'ity avy amin'ny LinkSmart, sehatra fampiroboroboana votoaty aho dia mahatsapa ho tsara foana ny manoratra Cmandefasa Blogging for Dummies ary ny torohevitra tsy manam-potoana nomeny orinasa. Na dia somary lany daty aza ny toko momba ny motera fikarohana, ny paikady sisa dia miorina ao anatin'ny boky. Famahanam-bolongana orinasa no lynchpin an'ny paikady marketing atiny ary nitombo hatrany isan-taona.
Miaina amin'ny vanim-potoana izay ny Marketing Marketing angamba no mahaliana indrindra sy sarotra indrindra hatrizay. Miaraka amin'ny haino aman-jery vaovao amin'ny famoahana sy fomba vaovao hahatratrarana ny mpamaky izay mivoatra isan'andro, izahay mpitory dia mila mijanona eo an-tampon'ny fironana Marketing Content mba hitarika mpamaky bebe kokoa amin'ny atiny sarobidy.
Ny zava-misy dia raha maniry ny hahazo ny fitokisana, ny fifandraisana ara-pientanam-po, ny fahazoana ary ny fitazonana ny mpanjifa amin'ny Internet ny orinasanao dia tsy maintsy manangana fahefana ianao ary manana ny toha-pahalalana azo ampiasaina ho an'ny mpitarika sy ny mpanjifa. Mitohy mivoatra ny indostria - miteraka toerana vaovao am-polony ary tena mila mpanoratra, mpamorona endrika ary mpila tantara.
Tags: 2014infographic marketing amin'ny atinyrohyfanjakan'ny marketing amin'ny atiny
Ahoana ny fomba fametrahana marketing ara-tsosialy amin'ny doka nentim-paharazana